App cusub oo lagu caawinayo qaxootiga cusub - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
App cusub oo lagu caawinayo qaxootiga cusub
La daabacay tisdag 31 maj 2016 kl 13.23
Tabbaruce:waxaan dhisnay app qaxootiga lagu caawinayo
Dhallinyaro dhiseysa app cusub oo qaxootiga lagu caawinayo. sawir: Warsame Elmi / Ekot Radio Sweden
Koox dhowr qof oo programmerare ayaa dhamaadkii todobaadkii hore isku aruursaday Stockholm si abuuraan farsamooyin sanco oo lagu hormarinaya is-dhexgalka Sweden.
– Waxaan sameynay app cusub oo isku aruurineysa dhamaan app-yada kale ee loogu talogalay qaxootiga iyo macaluumaadka kale ee ay qaxootiag u baahanyahiin, tusaale sida ay ku baraan karaan af iswiidhishka, Oscar Haglind oo ka mdi ah koox farsamo-yaaqano ah oo waqtigood ku tabbbaruey si ay u abuuraan app lagu caawinayo qaxootiga dalka ku cusub.
Qof dalka ku cusub waxaa jira caqabado badan oo la kulmayo markii isku-dayo in uu dalka Sweden iska-meeleeyo. Caqabadahas oo kalo ahaan kara luuqadda, deegaanka, shaqada iyo waxbrashada iyo weliba sidoo kale xirirka bulsho. App-ka cusub ee dhallinyaradan farsamo yaqanadaha ay sameeyaan ayaa la yriaahdaa Mighub ujeedadana waxay tahay in ruuxa qaxootiga ah uu ka helo app-yada kale ee qaxootiga loogutalo galay.
App-kan cusub ee Mighub ee ay isla goobta ku dhiseen dhallinyaradan waxaa ku jira ugu yaraan 20-tameeyo app oo tusaale ay mid yahiin mid kulminaya dadka dalka ku cusub iyo dadka waddanka ku dhashay, iyo weliba mid kale oo ruuxa dalka ku cusub ku wargelineysa shaqooyinka asag ku haboon.
– Midda aan maanta sameynay waxay tahay in aan kulminay farsamo yaqaano taf ku ah soo saarka sancooyin cusub oo waddanka laga isticmaali karo oo sidoo kalena qaxootiga cusub lagu caawin karo, ayuu yeri Milad Fallah oo ka socda Refugee Tech oo dhamaadkii todbaadkan soo qabanqaabisay kulanka ka dhacay Stockholm.
Munaasibada dhamaadkii todbadkii la qabtay waxaa qayb ka ahaa hey’adda socdaalak Migrationsverket. Madaxa howlaha hey’adda Mikeal Ribbenvik oo asna goobta ku sugnaa ayaa aad ugu qancay farsamada ay dhallinyarada sanco yaqaanada ah goobta ku soo bandhigeen.
– Hadaan nahay hey’adda socdaalka waqti dheer shaqadeena aan ku wargelino qaxootiga ay u badnayn waraaqo qeybin, telen iyo kulan. Halka ay Stockholm nala joogaa kooxdan farsadama tafta ku ah oo leh awood xirfadeed oo ad u sarey
måndag 30 maj 2016 kl 16.55